Ukusetyenziswa kwe-Muriatic Acid okanye Hydrochloric Acid
Abantu bachaze indlela abasebenzisa ngayo iAidiatic Acid
I-acid ye-Muriatic enye igama lika- hydrochloric acid , enye ye -acids ezinamandla . Ngaba usebenzisa i-muriatic acid okanye uhlaziye i-hydrochloric acid njengemichiza yendlu? Ukuba kunjalo, yintoni oyisebenzisayo? Abafundi baphendula lo mbuzo:
Ukusetyenziswa kwe-Muriatic / Hydrochloric Acid
Yisebenzise ukuze unciphise i-pH kunye ne-Total Alkalinity ye-pool yakho yokubhukuda.
Ndasebenzisa i-muriatic acid ekwenzeni inombolo enkulu yelitye yokucoca ibuyisela iinqwelo ze-ur kwindawo eqhelekileyo
Hydrochloric / Muratic Acid
Ndisebenzisa i-hydrochloric acid usebenzisa umlinganiselo we-3: 1 ngamanzi (i-asidi 3: amanzi 1). Sifudukela kwindlu esandula kwakhiwa kwaye iileyile kwindawo yokuhlambela zihlanganiswe nge-grout, ngoko ke ndiyisebenzisa isisombululo esingentla ukucoca i-grout kwi-tile. Ndiyisebenzisa kwakhona icocekile ye-muratic acid ukucoca (kunye ne-sprayer) I-Iron ngaphandle kwekhonkrit ejikeleze idilesi yam.
Yenza i-fludering flux yakho
Dissolve zinc ecocekileyo (umz., Ukusuka kwimeko ye-cell-dry) kwi-asiatic acid ukuze wenze i-acid yakho ye-acid ye-soldering. Amanqaku ambalwa ngeGoogle aza kubonisa indlela;) Qinisekisa ukuba ulandela izikhokelo zokuphepha! HAYI iphrojekthi yezingane!
Ndinexesha elidala le-ariatic acid kwisigumbi esingaphezu konyaka. Ndabona ukuba kukho ezinye iikristali okanye into ebonakala ngathi ityuwa ngaphandle kwebhotile. Ndiyazi ukuba ngaba kunjalo ityuwa. Yaye yintoni enye indlela engcono yokuyilahla ???
Mna kunye nabanye abaninzi basebenzisa i-muriatic acid ukuba banyibilikise ikhonkrithi kwiilori zethu zokuhambisa.
Maxa wambi kufuneka usebenzise.
Akukho Nendlela: Ezinye izibonda aziyi kuhamba kunye nantoni na enye into. Njengama- manganese amathandathu kwisitya sangasese (ndineenkompo zamanzi kwaye amathangi enyango ayifumana konke).
Ndisebenzisa i-muriatic acid okanye i-hydrochloric acid ukucoca ukukhula kwe-algae ukusuka ngasezantsi kwinqanawa yam. Qiniseka ukuba unamanzi umthombo wekhonkrithi, ngaphantsi kwaye ujikeleze isikebhe sakho okanye uza kuphelisa kunye nomzekelo wesimo sebhoyile. Gcina ii -acids ngaphandle kwengca kunye ne-aluminium.
Ukucoca i-gunk kwi-stalls zokuhamba, ngokulula
Yenza ukucoca iifestile ezindala zokuhambisa isantya. Kodwa kufuneka uqaphele kwaye ugqoke iiglavu. Kwakhona, vula iwindi phambi kokuba uqale ukuyisebenzisa ukuze ube ne-ventilation efanele. Ngoku akukho mfuneko yokuzama ukukhahlela kude i-gunk enenkani. I-acid ye-Muriatic yindlela yokuhamba xa unemisebenzi yokucoca okunzima.
Ngokukrakra? Andiyi kuba nalo makhemikhali endlwini yam okanye kwigaraji lam! Kuyingozi kakhulu. Kuthekani ukuba inkwenkwe okanye isilwanyana sichitha okanye into ethile. Kufuneka kubekho iikhemikhali ezingcono ukusebenzisa i-asidi.
Ndisebenzisa i-muriatic acid ukucoca i-yuck ngaphandle kwekhonkrithi. Kwakulungile ukuba uyilungisele isitywine okanye enye unyango.
Ngaba I-Car Car Worth Fixing?
Inkcazo ye-French Word Baiser
"Yiyiphi into" ngoDave Eggers - Ukuhlaziywa kweNcwadi
Fumana indlela amaHindu achaza ngayo iDharma
Umtshato weMatrimonium - Umtshato wamaRoma